Isiliva iye kusukela ezikhathini zasendulo ezaziwa futhi ubelokhu ongowenani elikhulu kuze kube yilapho ngafunda aphele eyayenziwe. Kuze kube kuleli qophelo igolide zenani ezifakwa esiliva ingasaphathwa is liphansi kakhulu, ngisho noma kuqhathaniswa kwezimayini zegolide. Kusukela-Sanskrit uhumusha njengoba esiliva ukukhanya, futhi sidilizwa Rus esiliva isihloko kubolekwe izwi Indian lasendulo "Sarpa" - Moon futhi Sickle.
Njengezinye izinto zensimbi eziyigugu, esiliva kuphawulwa ukuphuka. Digital, isibonelo, 925 kubonisa ukuthi metal njengoba okuhlanzekile umkhiqizo 1000 ingxubevange izingcezu. Ngaphambili, ngokwesiko asetshenziselwa ingxubevange zinc nethusi, kodwa namuhla, abakhiqizi abaningi self-ukuhlonipha belahla ukusetshenziswa zinc ngenxa ubufakazi nezinye izinsimbi zayo harmfulness bese usebenzisa ephephile.
Kungakhathaliseki noma cha eliphezulu esiliva, ke mnyama ngokuhamba kwesikhathi, njenganoma yikuphi sensimbi oxidized. Nakuba abantu abaningi abakholelwa ezeni zikholelwa ukuthi lokhu umonakalo, kodwa kukhona nje ukuphendula ikhemikhali izinto ezikuzungezile njengento enhle kumuntu ekuphileni kwansuku zonke. namachibi Isiliva kungabangela lezi zinto ezilandelayo:
ukuxhumana ngqo izimonyo;
Ezisebenzisa igesi kanye amathayi;
isikhuphasha amaqanda kanye anyanisi.
Naphezu kwakho konke lokhu, isiliva akaphelelwa kwayo, futhi kungenziwa kalula iphucuziwe. Indlela ukuhlanza esiliva ekhaya? Lokhu kuzoxoxwa ngakho esihlokweni.
Ngokuyikho wokuhlanza zesiliva nezinto ekhaya senziwa ngezindlela ammonia. Leli thuluzi elula kakhulu futhi kufinyeleleke, okuyinto ikuvumela ukuba balahle qwembe ecasulayo esiliva. Udinga ukuthenga isixazululo 10%. Ukuhlanza inqubo Kunconywa izigubhu ingilazi encane, okuyinto ezibekwe silverware. Ngemuva kwemizuzu engu-20, nesiliva kahle wageza ngamanzi afudumele ukugijima yomiswa. Leresiphi kufanelekile imikhiqizo ezingavikelekile kakhulu oxidized, noma kanjalo kungavinjelwa.
Ammonia kanye wokuxubha
Kulokhu, ekuqaleni esiliva is bahlanza nge isixubho ubudala ngomuthi wokuxubha. Ngemva kwalokho bacwilisa zibe ammonia -minute 15. Leresiphi kufanelekile isiliva ne namachibi eqinile, kodwa hhayi lwemigexo ngamatshe.
Ammonia, i-hydrogen peroxide kanye nengane insipho
Zonke izithako axutshwa ezingxenyeni alinganayo futhi buhlanjululwe ingilazi yamanzi. Ingxube sengezwe isiliva ngekota yehora. Ngemva metal usuwomile, kubalulekile ukuba Phucuzani indwangu yoboya.
Isiliva kumele kube manzi, kodwa ngamanzi afudumele futhi egxilile isitsha dentifrice powder. Uzodinga ukuba uwuhlikihle ngendwangu wenza yoboya noma Suede. Lapho beqeda yokuhlanza powder kwesiliva wageza.
Lapho ukuhlanza liyadingeka ukuncibilikisa isipuni baking soda in isigamu ilitha lamanzi, ingxube kufanele kube evuthayo ukufudumeza. Uma isixazululo abilisiwe, abambe isinqamu encane ucwecwe ukudla ibekwe silverware. Ngemuva kwemizuzu engu-15 ungafinyelela isiliva hashaza ngamanzi.
Ukuhlanza zesiliva nezinto ekhaya kungaba kwenziwe ngosizo usawoti. Kudinga 200 ml amanzi eyodwa teaspoonful kasawoti. Uma enyakaza kahle, ikhambi kungenziwa egxilile silverware futhi ushiye amahora ambalwa, hhayi ngaphansi kuka 4. Uma esiliva ingcolile kakhulu, kungaba abiliswe isixazululo imizuzu engu-15, nje ungalilahli ubucwebe ngamatshe.
Salt, baking soda futhi yokuwasha
Ngo elilodwa lamanzi adingekayo isipuni baking soda, usawoti kanye yokugeza izitsha yokuwasha. Nomkhombe kangcono aluminium Cookware. Umthamo ikhambi udinga ukuba agqoke umlilo omncane, engeza imihlobiso kanye ubilise imizuzu engaba ngu-20. Ngemva kwalokho, ukudonsa esiliveni, bese Sula eyomile ucezu negogo indwangu.
Leresiphi kungenziwa ngokuhlanganiswa ukupheka. Uma amazambane okuphekwe, amanzi sisuke ngaphansi kwawo kumelwe likhishelwe esitsheni ehlukile, engeza ucwecwe kancane ageze zokuhloba esiliva, ubilise imizuzu mayelana 5-7. Ngemva kwalokho, umkhiqizo ithathwa, omisiwe futhi yona-iphucuziwe.
ikhaya yokuhlanza zesiliva nezinto zizosebenza uma ukusebenzisa uviniga 9%, okuyinto evuthayo futhi egxilile zokuhlobisa it. Ngemuva kwemizuzu engu-10, nesiliva angasuswa, omisiwe futhi kahle deda negogo.
Amanzi emva ukupheka amaqanda
Ngemva iqanda iphekwe, amanzi akufanele wathela, futhi nje cool. Lolu ketshezi efudumele ibekwe imihlobiso 15 noma angu-20. Emva kwalesi sikhathi kubuya imihlobiso nesiliva zisishulwe, wageza kahle wagcoba ngendwangu engokwemvelo.
yokuhlanza ngokuyikho ekhaya zesiliva nezinto akuyona ezibizayo noma eziningi umzamo. Ngokwesibonelo, ukusetshenziswa citric acid. Dilution yokwakheka umkhiqizo azodinga isikhwama, mayelana 0.7 amalitha amanzi kanye obuncane zethusi wire. Lonke Ukwakheka ibekwe endaweni okugeza amanzi. Imihlobiso zifakwa isixazululo kanye thumba imizuzu 30. Emva inqubo, imigexo kufanele omisiwe futhi iphucuziwe.
Ikhona yini enye indlela aphethwe esiliva wokuhlanza ekhaya? Izindlela Kungase kubonakale kungavamile, kodwa ngempumelelo. Abaningi wezwa ngalokho okwenzeka ku ukuwasha kanye yokuhlanza izindawo "Coca-Cola" iyathinteka, kanye nokusebenzisa kwayo ngesiliva. Ukuhlanza ubucwebe okudingeka uthele isiphuzo emgqonyeni, ukuzigcina nesiliva, wagqoka umlilo kancane. Ngemuva kwemizuzu engu-7 imihlobiso kudingeka ukuyikhipha futhi ushiye ukuze ome.
Imithetho wokuhlanza zesiliva nezinto ngamatshe
Ukuhlanza izihloko nge ayigugu noma semiprecious futhi obunamaparele esiliva has umehluko omkhulu, kulapho ke uma ubanjwa ekhaya. Kulokhu, kubaluleke kakhulu itshe kwabantu. Ayanda kuba, kuba lula ukuhlanza silverware.
Indlela ukuhlanza ubucwebe esiliva ekhaya, kakade. Futhi lokho uma base bekhulelwe ngamatshe? Uma umkhiqizo has yisimaragidu, aquamarine futhi isafire, zingase zihlanzwe ngisho ne powder, ukusebenzisa isixubho ngisho bafudumale.
Ungavuli okuhlanzekile yokuwasha nezinye Abrasives imikhiqizo, oluluhlaza obunamaparele, moonstone, itshe eliyigugu noma Malachite. Naphezu kweqiniso lokuthi la madwala futhi babe high ukuminyana Coefficient, kodwa ngemva nolaka wokuhlanza kubo angahlala imihuzuko.
Ngokuphazima umcimbi akufanele wadalula lokushisa ukweqisa amatshe onjalo afana ngazo irubi, garnet kanye itopazi. Ngemva ukucwiliswa emanzini ashisayo, zingashintsha ngisho umbala.
Abayona ngaphandle nesiliva elinongwengwezi lwezilwanyana ingilazi noma amatshe eyigugu. imihlobiso esinjalo singazisiza futhi ukuba zihlanzwe, kodwa ngendlela 'soft' kuphela. Ngokwesibonelo, swab ukotini yafakwa powder izinyo futhi ngobumnene wayokhuhla off udoti. Oku-uvolo kungenziwa egxilile ammonia liquid. Akunakusetshenziswa Awukwazi ukusebenzisa Abrasives, futhi izinga lokushisa eliphezulu. amatshe olunjalo idluliselwe futhi umonakalo lokukhanda.
amatshe Shoe esiliva isakhiwo elithambile futhi ukungena nakwamanye amazwe
Yiziphi ezinye izindlela zaziwa? Indlela ukuhlanza ubucwebe esiliva ngamatshe nge isakhiwo elithambile futhi ukungena nakwamanye amazwe? Lezi amatshe zihlanganisa unina pearl, amaparele, lendlovu amber. Kunoma ikuphi ayikwazi ukusetshenziswa based zokuhlanza ammonia, ene-asidi, ane-alikhali noma impahla athile.
Amber nangamaparele kungaba zihlale efudumele, kodwa hhayi amanzi ashisayo, wesula nge elithambile indwangu isakhiwo. Ngo amanzi ungakwazi ukwengeza insipho kancane. Uma une-coral silverware, kungcono ukuyihlanza ngaphandle kokuthinta kuyokhala itshe, njengoba kakhulu ebucayi kunoma nomthelela esisebenzayo.
Indlela yokufeza sheen esiliva
Ngaphandle kweqiniso lokuthi ngifuna ukubona isiliva lakho lisesimweni ahlanzekile kahle, kuyinto efiselekayo ukuthi futhi ukhanyisé.
Indlela ukuhlanza esiliva ekhaya lukhanye na? Ukuze wokucwebezelisa nokwamukela zibona on imikhiqizo usebenzisa nokunamathisela Goi. Ngomqondo onabile, zonke izindlela ngenhla yokuhlanza imikhiqizo ingafinyelela ukukhanya. Kodwa ngezinye izikhathi, ngisho noma wonke ebhuqwini amuke, esiliva kubonakala buphelile. Okusho ukuthi, enamathela ezinjalo - ungqimba ezondile ukugqwala. Ngakho-ke, kuzoba khona ukukhanya kungcono ukusebenzisa sula ekhethekile. Bona ngokuphephile qwembe ebusweni kwensimbi, futhi abanike ukubukeka ekhangayo, owawungumnyaka kuthenga.
Ezipholisha okungcono kakhulu esinakho iwukusebenzisa isiponji wenza kusukela i-cellulose, njengoba ngeke KLWEBHEKA esiliva. Ngikanye namalungu athile polishes afakiwe. Sponge ejenti ogelezayo nokumanzisa futhi wenze-naphambili iminyakazo, okungukuthi, phezulu naphansi, kodwa hhayi othize embuthanweni, umkhiqizo uhlanzekile. Ngemva wokucwebezelisa, lo mkhiqizo ngamanzi kampompi wesula ngendwangu eyomile ehlanzekile nethambile.
Zama njalo Sula silverware ngemva ngokuluhlaza ageza emfuleni, okugeza noma umcengezi. Futhi into enhle kakhulu ongayenza uwasuse ngaphambi bayoba endaweni ezimanzi.
Uma usebenzisa amagilavu enjoloba ukuwasha izitsha, kungcono ukususa iringi. Khumbula ukuthi esiliva akakubekezeleli contact ne injoloba.